<º Lalao: Verminian Trap | Avy amin'ny Linux
<º Lalao: Verminian Trap
Izy ireo dia Rohy | | Games, About us, soso-kevitra
Androany aho mitondra anao ny lalao farany an'ny lehibe Locomalito: Trap Verminian.
Amin'ity lalao ity dia voatery nanao mody vonjimaika amin'ny planeta ny maodelim-habakabakao Verminian, izay onenan'ireo bibikely lehibe. Ny tanjonay dia ny handrava ireo andian'olona miaraka amin'ny namanay amin'ny fanantenana hisy sambo mpamonjy voina.
Ity lalao ity dia azo lalaovina hatramin'ny olona 4 (2 miaraka amin'ny fitendry ary 2 miaraka amin'ny mpanara-maso) ary mampatsiahy ny lalao toa azy Tanànan'ny ady (NES / Famicom) na amin'ilay sarimihetsika Starship Troopers.
Azo alaina amin'ny Windows, GNU / Linux, OS X ary Ouya ary ny fampidinana azy, toy ny mahazatra amin'ny sanganasany, dia maimaim-poana.
Tsy isalasalana fa miatrika lalao lehibe iray hafa an'i Locomalito isika.
Avelako manaraka ianao miaraka a Gameplay nataoko (Miala tsiny amin'ny kalitaon'ny horonantsary, ambany ny famahana ny lalao.):
Pejy lalao sy fisintomana
Raha mampiasa Archlinux na Manjaro ianao dia azonao apetraka amin'ny AUR amin'ny alàlan'ny fonosana verminian-fandrika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Games » <º Lalao: Verminian Trap
Toa mampiankin-doha ny lalao. Raha nanana Internet aho dia ronono.
Mahagaga ity lalao ity. Andao hojerentsika raha azoko atao ny mamono io aretina pesta io.
Ny zavatra voalohany miarahaba anao noho io asa tsara io. LEHIBE fotsiny ny lalao! Mampatsiahy ahy be dia be ny Amstrad CPC 128 kb ahy io, manana filalaovana goavambe izy io ary mampiankin-doha tokoa !!! Toa milay ihany koa. TENA JOBILY LEHIBE!
Ny hany sisa tavela toa ahy dia tsy dia saro-kenatra loatra amin'ny tànana miampita eo amin'ny fitendry hahaha… manahoana!
Ankavia aho ary tsy manana olana amin'ny keyboard na fanaraha-maso.
Azazela dia hoy izy:
Lalao mahafinaritra ahy amin'ny hira, misaotra nizara izany tamin'ny rehetra.
Mamaly an'i Azazel
Misaotra anao! Toa tsara. Toa mampiankin-doha tokoa izany ary mampatsiahy ahy ny Battle City ihany koa.
Ity no miseho amiko rehefa manandrana mitantana azy aho: S
Rahampitso dia andramako milamina kokoa. Amin'izao fotoana izao dia vita ny fanavaozana ny Windows Vista (anio no patch voatahy ny talata).
Inona no distro ary inona ny kinovan'ny openal napetrakao?
Manana ny 1.15.1 aho
Mampiasa Gamemaker Studio i Locomalito ary mitaky farafaharatsiny Ubuntu 12.10, ka mila manana Openal 1.14 farafaharatsiny hametrahana ianao
Manana ny mitovy dika aminao aho, napetrako avy tany AUR.
Misy SolusOS 2 Alpha 9
Famafana ireo rakitra marobe amin'ny fomba mora amin'ny MC: Fizarana faha-2